‘फेक'का दुःख अनेक
काठमाडौंं-सामाजिक सञ्जाल यस्तो चौतारी बनेको छ, जहाँ दुःखसुख बिसाउन पाइन्छ। तर, यसका सकारात्मक पक्ष मात्रै छैनन्। भौतिक रूपमा जहाँ पुगे पनि एकअर्काबारे नियमित थाहा पाउने नयाँ माध्यम भएको छ यो।...
अञ्जुका अधिकारका पक्षमा
सामाजिक सञ्जालमा अहिले गायिका अञ्जु पन्तलाई 'हिन्दू धर्म विरोधी'का रूपमा प्रचार गरिएको छ। वास्तविकता नबुझी एकतर्फी रूपमा फैलाएको अफवाहमा टेकेर 'हमलासम्म गर्ने' धम्की उनको फेसबुक र मोबाइलमा निरन्तर आइरहेका छन्।...
मानिसले किन गर्छ चुम्बन?
मानिसले मात्रै चुम्बन किन गर्छ र बाँकी जीवले किन गर्दैनन्? चुम्बन प्रकृतिप्रदत्त स्वभाव हो या मानिसको कृत्रिम अविष्कार? यसै विषयमा बीबीसीको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित एक रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत छ।
सन् १९४० देखि नै नेपालीहरू हङकङमा बस्न थालेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र हङकङ धेरै नेपालीको सपनाको शहर पनि हो। यहाँका नेपालीले देशका लागि आफ्ना तहबाट मनग्गे योगदान गरिरहेका छन्। नेपाली...
पोखरीमा पसेर ज्यान जोगाउनेहरू
त्यो पोखरीमा गोमनलगायत विषालु सर्प हुन्छन् । दाँत तिखारेर बसेका भोका गोही र कसमाथि जाइलागूँ भनेर ढुकेझैँ गरी बसेका जलगैँडा पनि त्यहीँ हुन्छन् । यी सारा खतराको पर्वाह नगरी हजारौँ दक्षिण सुडानी त्यही जलाशयमा लुक्न जान्छन् । किनभने, जमिनमा उनीहरूमाथि…